Sideen u abuuri karaa isku xirka boggeyga sida matoor gawaarida gawaarida ah?
Maalmahan, dadkoo dhan way ogyihiin muhiimadda ay leedahay xiriirka tayada tayada ee shabakad kasta oo horumarineed. Looma baahna in la yiraahdo tayada ayaa had iyo jeer garaacaysa tirada halkan - iska ilaabi waqtiyadii hore marka tirakoobka weyn ee loo adeegsado inuu noqdo midka ugu sarreeya, halkii tayada dhabta ah. Oo hoosta ku socota waxaan kuu sheegi doonaa siyaabaha seddexda waxtarka ugu fiican ee helitaanka xiriirada tayada leh, ama waxaan dhihi karaa - sida gawaarida gawaarida gawaarida ah oo aan adigu wax u dhimayn. Sidaa daraadeed, aan aragno sida aad u heli karto backlit tayada, ama waxaan dhihi karnaa DIY toos ah oo loo yaqaan 'backlink generator', oo isku dayaya is-dhaafsiga isku-xidhka, iyo sidoo kale samaynta mawduucyada mawduucyada martida si aad u hesho xiriir dhexdhexaad ah PR-ga (bogga bogga) iyo DA ).
Habkan hore ee is-dhaafsiga is-beddelka (haddii kale, isku-xidhka isku-xirka) ayaa loo adeegsadaa si loo dhiso tiro badan oo dib-u-eegis tayo leh. Isbarbardhigga is-weydaarsiga ayaa sidoo kale loo yaqaanaa aaladda gawaarida ee gawaarida gawaarida ah. Habkani wuxuu inta badan u ogolaanayaa helitaanka xiriiro badan oo isbeddelay, tusaale ahaan inta u dhexeysa goobtaada iyo boggaga kale (i. e. , bogagga blogka ee ay sameeyeen bloggersada kale, ama malaha kasta oo internetka kale oo diyaar u ah oo diyaar u ah inay ka qaybqaataan nidaamkan dhexdhexaadinta leh).
Dabcan, is-dhaafsiga is-weydaarsiga wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, marka laga reebo khatarta suurtagalka ah ee lagu galo rikoodhka rikoodhka ee matoorada raadinta - labada dhinac ee heshiiska. Waxaan ula jeedaa in xaalad kasta oo aad tahay inaad noqoto mid ku filan ugu yaraan si aad u tijaabiso mar - sababtoo ah tani waa sida saxda ah ee dadku u helayaan waxtarka. Marka, dejinta diiradda ugu weyn ee guulahaaga ku soo hagaagaysa, ma ahan khasaarooyin laxiriira xiriirka isdhaafsiga, waxaa kale oo lagugula talinayaa inaad qaaddid taxadar. Waxaan ula jeedaa in barta internetka ah ama website-keeda ay tijaabiso qorshahan markii ugu horreysay ay noqoto go'aan fiican oo si fiican loo soo abaabulay oo lagu fahmi karo shuruucda dhabta ah ee ciyaarta kahor, iyada oon helin ganaax toos ah.
Isbarbardhigga is-beddelku wuxuu u eg yahay waxyaabo halis ah xitaa markaa tijaabiyo hal mar, sax? Ka dibna waxaad sidoo kale tixgelin kartaa qaabka kale ee dhismaha xidhiidhinta tayada - qoraallada martida ee martida. Marka la sameeyo si sax ah, bloggeynta martida ayaa sidoo kale noqon karta ikhtiyaari macquul ah oo kuu oggolaan kara inaad u dhaqanto sidii koronto-dhaliye toos ah oo adiga kelidood ah. Fiiri awoodda dhabta ah ee martida martida - ha u jihaysnin wakhti aad ku qorto waxyaabo aad u tayo sare leh. Marka ugu horeysa ee aad heshay heshiis hordhac ah oo lagu daabaco barta caanka ah ama ilo kale oo saddexaad oo internetka ah oo leh shabakad ku filan iyo maamulka domain, waa wakhti aad ku maalgeliso waqtigaaga iyo dadaalkaaga qoraal ahaan.
Marka maqaalkaga ama martidaada diyaar u tahay, dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad u gudbisaa si loogu helo dabeecad dabiici ah oo dabiici ah. By habka, lagu oggolaado by makiinadaha waaweyn ee search (sida Google laftiisa), habkan waxaa laga yaabaa mid ka ugu badbaado. Sidaa darteed, waa inaad isku daydaa inaad dib u hesho tayada tayada leh martida martida. Ka dib oo dhan, in si ballaaran loo isticmaalo in lagu rakibo baabuurta la beegsado ee tooska ah si toos ah bogga internetka, habkani waa mid si fiican loo aqoonsan yahay labadaba, iyo xirfadlayaal Source .